Ukuletha ukuze ukuphila imibono for yokugezela, isipiliyoni kule nkambu ayidingeki, njengoba kuba impela umsebenzi olula. Ngaphezu kwalokho, ziningi izinto ngoba kokuqeda le ngxenye endlini kukhona. Into esemqoka - ukuba ethile yolwazi ukuze uthole zokwakha kwesokudla futhi ukuvimbela amaphutha yokusebenza. Ukulanda imibono yokugezela, kufanele acabangele amanye amaphuzu abalulekile kakhulu. Lezi zihlanganisa ukunambitheka kanye amathuba zezimali yomnikazi, kanye izilinganiso egumbini. Kukhona inala ongakhetha umklamo, okuyinto zingafani isitayela kanye nentengo.
Into yokuqala ukuba banake yokuthi yokugezela libhekene nomswakama njalo okusezingeni eliphezulu. Ngaphezu kwalokho, le ndawo namanethiwekhi okuxhumana futhi imishini yezobuchwepheshe. Zonke lezi imininingwane ukudala i ukubukeka unaesthetic, ngakho ufuna ukufihla. Leli kamelo unenjongo utilitarian kanye, ngesikhathi esifanayo, ukhonza njengomPristi endaweni nesokuphumula. Ngakho-ke, izakhi ngokokuhlobisa elingaphakathi imibono yasekuqaleni yokugezela ezidingekayo. Le ngxenye endlini, njenganoma iyiphi enye, ubuso umnini wayo futhi lukhulu kungathiwani kuye futhi ukunambitheka kwakhe.
Le mfuneko esiyinhloko kokuqeda izinto okumele asetshenziswe egumbini lokugezela, akuncikile isitayela egumbini. Okokuqala, kumelwe babe abaphile imvelo ephephile umzimba womuntu futhi ihlanzekile. Ngaphezu kwalokho, umuntu kufanele sicabangele ukuthi singakanani impahla ngayinye lula ukusebenza, amelana umswakama kanye izinto amakhemikhali esebenzayo lapho zifakwe izinto zokususa amabala.
Indlela elula nokuqalisa design imibono yokugezela ngezandla ngangokunokwenzeka, usebenzisa isihloko sobumba. Le nguqulo zakudala umhlobiso izakhiwo hhayi ngokushesha emfashinini, ngaphandle, kulula ukufaka futhi kulula ukunakekelwa kwansuku zonke. Enye indlela lalivamile ka abami yokugezela - idivayisi eyenziwe panel plastic. ukusetshenziswa wabo inzuzo futhi ngokwezimali olungisiswayo yobuhle. Hhayi-ke, uma ufuna ukuthola kukho elula kakhudlwana futhi engabizi? Ukuze wenze lokhu, kukhona imibono ezintathu ofanele: izindonga yokudweba, wallpapering noma ifilimu. Yiqiniso, hhayi imibono ultra nemfashini for yokugezela, kodwa lokhu imvume ebukhoneni ukunambitheka kwezobuciko futhi uyakwazi ukuhlobisa it. zazingavamile wasebenzisa izindlela ezinjalo zangasese kokuphothula, kodwa kunezinzuzo zako.
Kunemibono eziyinkimbinkimbi nezinzima yasekuqaleni yokugezela, okuyinto ngempela bafanelwe ukunakwa abalandeli angavamile. Engeziwe yokuqedela izinto efanelekayo le njongo ezicini zonke, kungenzeka ukwaba amabhodi ezimazombezombe okwenziwa pre-oxosha polyurethane lacquer, Tile nge surface bushelelezi futhi KaMose. KaMose kungaba kokubili ekukhiqizweni futhi igunya, kanye ukudalwa iphethini okukhethekile, kuze umnikazi isithombe. Indaba ezingavamile kakhulu yokuqedela kuyinto linoleum ezindongeni, okuyinto zenziwa kuphela oda.
Marvis - Toothpaste kusuka Italy
Shower ukwahlukanisa: izinhlobo kanye nezici
Ukuphungula ukufingqa ku ethangini lwesitsha yangasese
Indlela thunga isiketi-ilanga?
Insomnia kungaholela isifo i-Alzheimer
Hockey: umlando ukuthuthukiswa. History of the World Hockey Championship
Utshwala "Boles" (Lucas Bols): okuthandwa, ukubuyekezwa
Antoniy Pechersky. Life of St Antoniya Pecherskogo. Anthony and Feodosiy Pecherskie, futhi ukuphila kwabo kwesikhathi